SALAMO 75	F. 1, 6 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 75	F. 1, 6
MPITSARA MARINA ANDRIAMANITRA
Eo ampelatanan’ny Tompo sady voafehiny ny zavatra rehetra eto amin’izao tontolo izao.
Mihazona ny andry iorenan’ izao tontolo izao ny Tompo. Manomboka amin’ny fiderana an’Andriamanitra ny mpanao Salamo ho fanehoana fa mpitantana mahagaga sy mahery ny fiainan’ny olony Izy. Na dia hitoetra amin’ny horohoro, ny herisetra sy ny tsy fisian’ny fahamarinana aza ny tany dia manamfy ny Tompo fa Izy no hampitoetra sy hanamafy orina ny andry amin’ny fampiharany ny fahamarinany. Izy no nihavian’ny zavatra rehetra, Izy no mihazona azy , Izy koa no antony (Romana 11.36).
Mitsara amin’ny rariny sy hitsiny izao tontolo izao ny Tompo. Mampietry ny mpireharaha, ny ratsy fanahy ny Tompo (75.5). Mampitandrina ihany koa ny Teny eto mba tsy hanandratra avo ny tandroka izay hanehoana ny hery ka nanaovana an’Andriamanitra ho tsinontsinona. Ho avy ny andro voatondro (2, 7) ka amin’ny fiandrianany tanteraka no hamalian’ny Tompo. (Salamo 1). Andriamanitra Ilay Tompon’ny Hery sy ny fahefana no hampietry sy hanadratra (Salamo 75.11, Matio 23.12). Hampidaraboka ny mpireheraha ny Tompo. Hisotro ilay kapoaky ny fahatezeran’Andriamanitra ny mpiodina. Hosotroiny hatrany amin’ny faikany izany. Tsara fatra sady mahitsy ny fitsaran’Andriamanitra satria Izy no Ilay Mahatoky sy Marina (Apokalipsy 19.11).
Mahatonga antsika hanana fanajana sy fangovitana izao teny izao ka manosika antsika hanadratra ny Tompo sy hialoka eo amin’ny Tanany mahery. Aoka Jehovah no horeherehantsika.
Fisaorana sy fiankohofana (9-10). Manatitra ny fisaorana ny mpanao Salamo satria tsara sy mahatalanjona ny fitantanan’ny Tompo. Misaora ny Tompo amin’ny alehanao rehetra fa marina sy mahitsy ny lalany